Dunkaroo Dip - Ezi Ntụziaka
kedu ka esi egbutu fennel
ị nwere ike esi nri toki anụ ezi na oven
Gini bu ihe eji eme ihe na ite di ozugbo
gịnị bụ ihe dị iche na marinara sauce and tomato sauce
ogologo oge ka esi nri ụtọ nduku na 325
Dabere na 90 na Dunkaroo Dip! Naanị atọ ihe eji arụ ọrụ na nkeji atọ ị nwere ike kuki kuki gị na ffingti mara mma.
Daybọchị 21 na-edozi atụmatụ nri nri nri 1200
Ọ bụrụ na ị bụ nwa ewu na 90 (ma ọ bụ nne na nna nke otu), ikekwe ị ga-echeta nri nri a ma ama, Dunkaroo’s. Oge nwata kacha mma nri ! Olee otú ị ga-n'anya ndị obere onye containers nke funfetti frosting na obere kuki. O di nwute, na erebeghi Dunkaroo na U.S. mana ị nwere ike ime Dunkaroo Dip n'ụlọ!
Oge ụfọdụ a na m atụ uche nwata m. Ka m na-etolite, ọ na-adị m ka ihe ncheta ndị ọzọ ò bum. Nri na-aru oru oma nke na enyere m aka icheta. Nke a Dunkaroo Dip na-eme ka m laghachi ịnọdụ ala na ụlọ akwụkwọ elementrị na-ekiri enyi Amy na-asọba mmiri ara ehi ya na egosipụta. M hụrụ n'anya na m nwere ike ịmeghachi nke ahụ ma cheta ihe ọhụrụ ka mụ na ụmụ m nwanyị na-enwe ọ thisụ. Olileanya ha ga-echeta ịnọnyere m, na-ekwu okwu, ma na-achị ọchị, ka anyị na-apụ.
Zọ kachasị mma iji rie ihe a itinye dị na obere obere Teddy Grahams. Did makwaara na ha na-ere ndị achicha ụbọchị ọmụmụ?! Funfetti Ihe niile !!! Sprinkles na-eme m obi ụtọ.
Naanị mgbe i chere na ọ gaghị aka mma karịa, ọ na-eme! Nke a mikpuo na-ewe naanị 3 nkeji na 3 Efrata na otu onye bụ ndị bụ nonfat Greek yogọt. Ahụike, nri? Na na na, ma eleghị anya na ọ bụghị dị ka ihe ọjọọ.
Nri anụ ezi aja aja na-ekpuchi nkịta na-ekpo ọkụ
Anyị na-agafe ọtụtụ Teddy Grahams n'ihi na ha na-enyere aka mee ka ụmụaka gbachi nkịtị. Ọfọn, ugbu a, anyị na-agabiga ọbụna karịa Dunkaroo dip! Ma ọ bụghị naanị maka ụmụaka. Di m nọ na-azọnye otu kuki n'otu nke ọzọ. Soooo riri ahụ. Are ga-ahụ ya n'anya! Nwee ya dị ka nri n’ụlọ ma ọ bụ na nnọkọ oriri. Ọ ga-abụ kụrụ!
4,63site na16votu NyochaNtụziaka
Oge Nkwadebe5 Nkeji Oge nri0 Nkeji Oge zuru ezu5 Nkeji Ọrụ24 servings Onye edemedeMelanieỌ bụrụ na ị bụ nwa ewu na 90 (ma ọ bụ nne na nna nke otu), ikekwe ị ga-echeta nri nri a ma ama, Dunkaroo’s. Best ụmụaka nri! Bipute Ntụtụ
▢1 igbe Funfetti achicha Mix
▢1 8 ounce akpa Lite (ma ọ bụ abụba na-enweghị abụba) ụtarị dị jụụ, gbazee
▢1 iko yogọt Greek larịị
▢Ndị na-agbawa Graham
Gwakọta achicha achicha, Igwe oyi, na yogọt ọnụ na efere ruo mgbe ị ga-eji ire ụtọ. Na-eje ozi ma ọ bụ tinye n'ime ngwa nju oyi ruo mgbe ị ga-eje ozi.
Gị na Teddy Grahams rie nri, grackers, na / ma ọ bụ anụmanụ ịgbawa.
Calorisị:Ogbe 79,Carbohydrates:14g,Protein:1g,Abụba:1g,Sodium:119mg,Sugar:9g,Vitamin A:5IU,Calcium:18mg,Iron:Ugboromg
IsiokwuDunkaroo Dip N'ezieNri Esie yaOnye AmericaEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Ringkekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .
So ya jiri otutu ifesa ma mikpuo ya!
nọrọ na pennies kabeeji na noodles
Achicha Cookie Chip Chip
2 Mkpụrụ Mkpụrụ Na-enweghị Abụba